Ukraine Oo ka Carootay Tartan Uu Madaxwyne Putin kaga Qayb-galay Crimea.(Sawiro) – Heemaal News Network
Dowladda Ukraine ayaa ka cadhootay booqashada Madaxweyne Vladimir Putin uu ku yimid dhulka laga haysto ee muranku ka taagan yahay ee gacanka Crimea, isagoo halkaasi uga qeybgalay debaaldegga mootooyinka.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa cabasho ka dhan ah Putin u gudbisay xukuumada Mascow, waxayna booqashadasi ku tilmaantay mid xadgudub ula kac ah ku ah madax-bannaanida Ukraine”.
Crimea ayaa Ukraine laga qabsaday 2014, iyadoo waxa laga yaqyaqsiyoodo ku tilmaantay mowjado wadaniyad jaceyl ah oo ka soo ifbaxay Ruushka.
Madaxwayne Putin ayaa bandhiga mootooyinka kala soo qayb galay kooxdan loo yaqaan the Night Wolves, oo ah koox ay wadaniyaddu ku dheer tahay ee garabka midige, islamarkaana aad ugu dhaw Madaxweyne Putin.
Kooxdan Cunsuriyada ka muuqata ayaa waxay sanadkan bandhigga sanadguurada ku qabsadeen magaalada Sevastopol oo ah magaalada ugu weyn gacanka, kuwaasoo taageera in Ruushku uu qabsado gacanka Crimea.
Booshada Mr Putin ayaa u muuqtay marti sharaf iyadoo ay wadayaasha mootoyinkana ay ku soo xoomeen hogaamiya Ruushka, kuwaasi oo la arkayay in ay sawiro la galayeen madaxweynaha.
Sikastaba ha ahaatee booqashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay sare u sii kacayso xasaradda ka taagn dalka uu hogaamiyo Mr Putin, kwaasoo isu soo baxyo ka dhigayay waddoyinka magaala madaxda dalka Ruushka, islamarkaasina dalbanayay in doorashoyooinka dowladda hoose ee bisha September ay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah.
Xisbiga Wadani Oo ka Been-sheegay Mawqifkooda ku Aadan Saami-qaybsiga Awdal.